Ihe kpatara inwe akwukwo ahia - Muta ahia 2
Ebumnuche iji nweta akwụkwọ akụkọ ahia
Ebumnuche Ihe Mere I Ji Kwesịrị Inwe Journal Trading
Akwụkwọ ahịa a na-azụ ahịa bụ naanị ndekọ nke ọrụ ahịa gị niile. Dịka, akwụkwọ akụkọ na-enye ndị ọrụ ọ bụla siri ike mkpa iji nyochaa onwe ha n'ụzọ ziri ezi. Ma olee uru idebe akwụkwọ akụkọ dị iche?
Ọfọn, ị nwere ike ịjụ ihe kpatara ịdebe akwụkwọ akụkọ n'ihi na ndị na-ere ahịa na-enye ndekọ oge dị adị maka azụmaahịa. E wezụga nke ahụ, onye na-ere ahia na-enye ndekọ nke na-agbaso ike ịzụta, uru na ọghọm maka azụmaahịa ọ bụla, yana oke ọrụ.
Agbanyeghị, ọ bụ ezie na onye na-ere ahịa na-enye ndekọ, ịdebe akwụkwọ akụkọ bụ ihe mbụ na-eme ka onye ahịa ọ bụla nwee ike ịba uru na ahịa azụmaahịa. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kpatara ị ga - eji nwee akwụkwọ ndekọ ahịa maka ma ndị ahịa dị mma ma dị mma.
Ka oge na-aga, akwụkwọ akụkọ ga - enyere gị aka n'akụkọ ihe mere eme. Ewezuga inye nchịkọta ọrụ azụmahịa gị, ọ na-egosipụtakwa ọnọdụ nke akaụntụ azụmaahịa. Ihu ọma, ọ na-etolite nchekwa data nke akaụntụ onye ahịa.
Yabụ, ọ na-enye gị ohere ịlaghachi n'oge wee chọpụta ọnụọgụgụ oge ị gbanwere, ụdị ego abụọ mere nke kacha mma, etu azụmaahịa ọ bụla siri gaa, na ọbụlagodi okpokolo agba ndị ahụ nyere uru kacha mma.
A magazin ga - emecha baara gị uru dịka ọ ga - enyere aka nyochaa usoro gị. Ọ ga - enyere gị aka ịghọta etu usoro gị si dị mma mgbe ọ bụla ị gbanwere ọnọdụ ahịa. Ya mere, ị ga - enwe azịza nye ụfọdụ ajụjụ dị ka otu sistemu gị siri sie ike na ahịa ọ bụla, ọdịiche dị na etiti oge.
Ọtụtụ ndị folks nwere ike na-eche na akwụkwọ akụkọ ga-enwe naanị ndekọ ndekọ azụmaahịa. Agbanyeghị, ọ gụnyere ozi gbasara atụmatụ gị maka azụmaahịa ọ bụla. Ọ bụ atụmatụ ga - enyere gị aka ịtụle azụmaahịa tupu iwere ha ngwa ngwa.
Ọ ga - enyere aka ịchọpụta oke ọ bụla ịbanye, ọnụọgụ ihe egwu ị nwere ike ịnweta, uru ị ga - enweta, yana etu esi ejikwa usoro azụmaahịa ya.
Ya mere, akwụkwọ akụkọ bụ naanị ụzọ eji edekọ echiche nke onwe gị mana ọnụọgụgụ yana yana ime ka o kwe omume. N'ụzọ bụ isi, ha bụ ntọala nke usoro atụmatụ maka ịzụ ahịa.
Ọzọkwa, akwụkwọ akụkọ ahia na-enyere aka ịgbanwe ụdị omume gị na-emebi emebi ịbụ ụlọ. N'ime usoro ịgbanwe atụmatụ ndị ahụ na ndị na-ewu ụlọ, a na-ewulite ntụkwasị obi dị elu. N'oge ahụ ugbu a, ị gaghị eche na ọ baghị uru na azụmaahịa bara uru.
E wezụga nke ahụ, ọghọm a yiri ka a ga-eme atụmatụ, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu dị ka ịbụ onye emerịrị.
Na azụmaahịa azụmaahịa, ntụkwasị obi bụ ihe niile, ozugbo ị meriri, ị ga - achọ mmeri ọzọ, mana mgbe ị tufuru, ụjọ na ụjọ na - ewere, nke dị egwu. Ya mere, akwụkwọ akụkọ na-enye aka ịchịkọta ọnụ ọgụgụ iji kwadebe atụmatụ ịpụta mmeri.
Main Concepts nke a Journal
O doro anya na akwụkwọ akụkọ ahia dị mkpa na Forex. A na-atụ aro ịdebe akwụkwọ n'ụzọ ọ ga-esi mezuo echiche abụọ dị mkpa. Echiche ndị ahụ gụnyere;
Ọ ghaghị ịnwe akwụkwọ akụkọ oge niile nke azụmahịa niile ị nwere ike ịgbakọta yana nchịkọta iji nwee ndekọ zuru oke nke mbọ gị. Dabere na ikike gị, ịnwere ike iji mpempe akwụkwọ kachasị mma nke na-emere gị ọtụtụ ọrụ.
Okwesiri inwe mpempe akwụkwọ edere kpọmkwem iji chọpụta azụmaahịa ahụ, nke na-egosi ọkwa ntinye, nkwụsị nkwụsị, yana ọkwa uru bara uru. Ọzọkwa, ịkwesịrị akara maka ihe kpatara ịme azụmaahịa ahụ.
Ikwesiri ighota mgbe nile na usoro ahia ma obu usoro eji eme ihe agagh agwakọta. Debe akwụkwọ akụkọ ọ bụla iche ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ usoro azụmahịa.
Obi ike dị mkpa na azụmaahịa azụmaahịa, ọ ga-abịa mgbe ị matara maka atụmanya nke usoro gị. Igbu ahia ma ọ bụ ụjọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị ga-efu ya, nke ị na-agaghị emecha.
Yabụ, azụmaahịa azụmaahịa izizi gị kwesịrị ịbụ ide akwụkwọ nke ga-abụ ihe dị oke mkpa na azụmaahịa gị. Ozugbo ị nweela ọganihu, ị ga-ahụzi na akwụkwọ azụmaahịa bụ ezigbo ndị enyi yana ndị ndụmọdụ kachasị mma.
Emelitere ikpeazụ: October 3rd, 2019